September 2021 - News 88 Post
किन हटाए महेश बस्नेतले भाई–बुहारीलाई बधाई दिएको तस्बिर, यस्ताे छ भित्री कहानी !
September 26, 2021 N88LeaveaComment on किन हटाए महेश बस्नेतले भाई–बुहारीलाई बधाई दिएको तस्बिर, यस्ताे छ भित्री कहानी !
भक्तपुर । एमालेका नेता महेश बस्नेतले आफ्नो नाता पर्ने ‘भाइ–बुहारी’लाई शुभकाना र बधाई दिएर फेसबुकमा पोस्ट गरेको विवाहको तस्विर हटाएका छन् । तस्बिरमा कमेन्ट र लाईकहरू अत्याधिक आएका थिए । कमेन्ट नानाभाँती आएपछि एमालेका नेता बस्नेतले तस्बिर हटाएको चर्चा छ । एमालेको भ्रातृ संगठन युथ फोर्स नेपालका मोरङ अध्यक्ष परशुराम बस्नेतकी डिभोर्सी कान्छी श्रीमतीलाई बस्नेतका […]
मैले गरेकाे संसद वि’घटन ठीक थियाे : अध्यक्ष ओली
September 26, 2021 September 27, 2021 N88LeaveaComment on मैले गरेकाे संसद वि’घटन ठीक थियाे : अध्यक्ष ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा जाने कुरा जहिल्यै पनि ठीक भएको बताएका छन् । उनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन् । ‘ताजा जनादेशमा जाने कुरा राम्रो हो, राम्रो भएकैले संसद विघटन गरिएको हो तर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई पछार्नका लागि […]
एमालेमा सात उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव, को–को हुन्छन् प्रतिनिधि ?
September 26, 2021 September 26, 2021 N88LeaveaComment on एमालेमा सात उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव, को–को हुन्छन् प्रतिनिधि ?
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकले हाल कायम रहेको पदाधिकारी सङ्ख्या हेरफेरको प्रस्ताव अघि बढाएको छ । तीन दिनदेखि जारी बैठक समापनपछि बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रचार विभाग प्रमुख योगश भट्टराईले महासचिव, उपमहासचिव र सचिवको सङ्ख्या हाल रहेको कायम गर्दै सातजना उपाध्यक्षको विषय समूहगत छलफलमा उठेको बताए । उनका अनुसार सो विषयमा पार्टी अध्यक्ष […]
केन्द्रीय कमिटि बैठकमै खाए केपी ओलीले यस्ताे ‘बाचा कसम’, भीम रावल खुशीले गदगद
September 26, 2021 N88LeaveaComment on केन्द्रीय कमिटि बैठकमै खाए केपी ओलीले यस्ताे ‘बाचा कसम’, भीम रावल खुशीले गदगद
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष डा. भीम बहादुर रावलले दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनेर उठाएको माग सम्बोधन गर्ने भएका छन् । अध्यक्ष ओलीले कति पनि विचलित नहुन र माग पूरा गर्न कटिबद्ध र प्रतिबद्ध रहेको बताएपछि भीम रावल खुसीले गदगद भएका हुन् । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि स्थायी कमिटीको […]
आगामी निर्वाचनमा गोकर्ण बिष्टसँग चुनाव लड्ने रामकुमारी झाँक्रीकाे घाेषणा !
September 26, 2021 N88LeaveaComment on आगामी निर्वाचनमा गोकर्ण बिष्टसँग चुनाव लड्ने रामकुमारी झाँक्रीकाे घाेषणा !
काठमाडौँ । नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव रामकुमारी झाक्री र एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले आगामी चुनावमा एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्ने भएका छन् । आगामी हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ बाट झाँक्री र विष्ट उठ्ने देखिएको छ । एमालेका सचिव तथा पूर्वमन्त्री विष्ट निर्वाचित सो क्षेत्रबाट […]
अरुलाई दबाएर राज गर्न सफल हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्तिहरू !
September 26, 2021 N88LeaveaComment on अरुलाई दबाएर राज गर्न सफल हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्तिहरू !
काठमाडौँ । ज्योतिषी भाषाअनुसार हाम्रो जीवन राशिअनुसार चल्छ । तपाईमाथि गृह, नक्षेत्रको के कस्तो प्रभाव परेको छ, यो कुरा राशिले स्वतः दर्शाउँछ। आधुनिक युगमा जीइरहेकाले हामी ज्योतिषीसँग खासै सरोकार राख्दैनौं । तर, सत्य यो पनि हो कि जो समस्या जोतिषीद्वारा हल गरिन्छ, त्यो अन्य उपायबाट समाधान हुन सक्दैन। कुनै पनि व्यक्ति कस्तो होला ? जस्तो […]
September 26, 2021 N88LeaveaComment on बुलेट बाईकमा आयो अति शानदार नयाँ मोडल, १ लाख २५ हजार ८२५ मात्र मुल्य
एमाले बैठकको रोचक पाटो: बैठकबाटै भागे महासेठ
September 26, 2021 N88LeaveaComment on एमाले बैठकको रोचक पाटो: बैठकबाटै भागे महासेठ
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि च्यासलमा जारी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीसमूहमै विभाजन देखिएको छ । बैठकमा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठले टोली नेतालाई नै बोल्न रोकेपछि तनावको अवस्था बनेको बताइएको छ । महासेठकै सहमतिमा बनाइएका टोली नेता रामचन्द्र मण्डललाई बोल्न रोकेपछि तनाव देखिएको हो । प्रदेश २ बाट समूह छलफलको निष्कर्ष सुनाउने टोली नेता […]
एमाले बैठकस्थल छाडेर हिँडे भीम रावल भने– ‘समय आएपछि बोल्छु’
September 26, 2021 N88LeaveaComment on एमाले बैठकस्थल छाडेर हिँडे भीम रावल भने– ‘समय आएपछि बोल्छु’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट बाहिरिएका छन्। उनलाई आइतवारै बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्ना कुरा राख्न भनिएको थियो। तर उनले त्यहाँ आफ्नो केही कुरा नरहेको बताएका थिए। रावलले आफूले समय आएपछि बोल्ने भन्दै मौन बसेका थिए। त्यसपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि केही बेर बसेर उनी बाहिरिएका हुन्। असार २७ […]
बागमती प्रदेशमा एकिकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री , को भयो सिफारिस ?
September 26, 2021 N88LeaveaComment on बागमती प्रदेशमा एकिकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री , को भयो सिफारिस ?
काठमाडाैं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा गरिबीको अन्त्य र कुशल शासन व्यवस्था कायम गर्न नयाँ पार्टी खोलेको बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीको शपथग्रहण तथा मकवानपुर जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलाको आज हेटौंडामा सम्बोधन गर्दै उनले देश र जनताको पक्षमा निस्वार्थ एवं पवित्र भावनाका साथ गठन भएको नयाँ पार्टीले काम गर्ने […]